Wepamusoro 3 YEMAHARA PDF Kubatanidza, Kupatsanura, Reorder Zvishandiso pa Windows
Zvinyorwa zvePDP uye muoni wawo anonamira mazuva iwayo. Meseji mikuru yewebhu (seC Chrome, Edge, uye Firefox) inogona kupa faira rePDF, tisingatauri yakatsaurirwa Adobe PDF reader. Izvo zvakati, PDF vapepeti ve Windows vari kure kure uye vashoma pakati. Kana paine paine chikonzero chekushandisa zvinyorwa zvePDF, vese vaverengi vatataura pamusoro apa havagone kuita basa rakadai. Mimwe yemabasa akajairika aungangoda ndewe Unganidza, Split uye Reorder maPDF mapeji. Kunze kwekunge iwe ubhadharira mari yekutanga kuAdobe yeiri rezinesi reAdobe Acrobat, zvakaoma kugadzirisa faira rePDF.
Heano matatu FREE zvishandiso zvimwe kuAdobe Acrobat, ye Windows izvo zvinokutendera iwe kuti uite zvimwe, kana zvisiri ese ekutanga mashandiro akadai se Batanidza, paradzanisa uye Rongedza Zvinyorwa zvePDP.
#1PDFsam Basic - PDF Inopararira uye Unganidza Basic Edition
PDFsam basic asaita Batanidza, paradzanisa uye wabvisa. Hazvidikanwe kuve nechitarisiko chekunze kunze kwebhokisi, asi wakapihwa iwe unogona kubvisa uye kusanganisa zvinokwanisika kuitisa zvakare manita. Chinhu chimwe chete chekucherechedza ndechePDPam inoda Java runtime. Kana iwe uine pfungwa yakasimba yekupokana nekushandisa Java yakavakirwa maapp uye ungade kuti yako system isavimbe neJRE saka izvi zvinogona kunge zvisiri sarudzo kwauri. Kunze kweJRE sechinhu chekutanga, PDFsam basic inoita zvayakavimbisa. Kune zvimwewo zvinhu zvakaita se Paradzaniswa nehukuru zvingave zvinobatsira kune makuru ePepa magwaro kugadzira akaenzana saizi chikamu mafaera kuti nyore share. Kupfuura zvese, PDFsam basic inoita zvainovimbisa kuita kwemahara. Zvakanaka yakasvibiswa UI iyo yakavakirwa paJava.
#2 PDF Shaper Yemahara
PDF Shaper Free ndeimwe freeware iyo inokutendera kuti ushandise mafaera ePDF. Kusiyana neyepfuura, izvi hazvidi chero imwezve JRE yekumhanyisa iyo app. Kumusoro chaiko kumashure, kunodambura pasi kutenderera kune zvina zvakakosha zvirevo zvakapoterera Zvinyorwa, Zvemukati, Mapeji, uye Kuchengetedza. Sezvakangoita PDFsam, zvinokutendera kuti Unganidza akawanda mafaera ePDP muPD imwechete, uyezve unokamura faira rePDP kuita diki size nenhamba dzepamapeji.
Pane zvimwe zvinhu pasi pemapeji ekutarisirwa peji, bvisa mapeji akasarudzwa mufaira rePDF file, pamwe nekuwedzera watermark kana bvisa mapeji akasarudzwa muPD yakapihwa. Zvimiro zvatinoona pano zvinotopfuura zvimwe zvezvinhu zvakakosha izvo zvimwe zvekushandisa zvinofanirwa kupa. Nekudaro, kana iwe uchitsvaga zvimwe mukati-pakadzika PDF editing, ita chokwadi chekuyeuka kutarisa zvese maficha PDF Shaper inofanirwa kuendesa mumahara edition usati waburitsa chikwama chako cheAdobe Acrobat.
Zvese zvishandiso zvataurwa pano kusvika pano hazvipe chiitiko chekuona kwekugadzirisa. Kusiyana neMacOS's Preview, haugone kuita shanduko muchivoni zvishandiso paunenge uchitsvaga mumagwaro. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuziva chaizvo peji ripi raunoda kubvarura kana kutanga kusanganisa paunenge uchishandisa chishandiso ichi. Izvi zvinoreva zvakare kuti, kuti unyatso kurongedza chero peji, iwe unofanirwa kukamura uye kuasanganisa iwo manually. Izvo zvakati, PDF Shaper Mahara ine basa rekutarisa kuti uone kuti iyo PDF yako yaizotaridzika sei isati yaenderera. Ingotinya chiratidzo che "Preview" (4th kubva kuruboshwe) kuti uone kuti PDF rakabatanidzwa rinoratidzika sei.
Chekupedzisira, iyo zvakare inopa kugadzira password yakachengetedzwa PDF uye kuvhura password yakachengetedzwa mafaera ePDF. Iyo zvakare inobvisa metadata yose, semuenzaniso, inogona kubvisa kana kugadzirisa munyori, yakagadzirwa misi nezvimwe .. Chekupedzisira "Saina" chikamu hachisi nezvePepa siginecha siginecha, ndezvekusaina dijitari nemakiyi ekuvanzika muPFX faira. Usavhiringidzike neye musina kusaina kusaina muPepa gwaro.
# 3 7-PDF Split & Unganidza
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, tine chimwe chishandiso icho chinotungamira kusanganisa uye kupatsanura. 7-PDF Split & Unganidza inopa izvo zvakanyanya pamatombo maviri ari pamusoro asi neyakagadzirirwa-UI. Paunenge iwe waona bhatani rekudzvanya, chishandiso chinoita basa racho. Isu hatisi kuenda pasi pegomba rearabhi nekuongorora kuti UX inogona kuvandudza sei, asi pane mukana wekuisa zvese zvinowanikwa UI mune imwe mharidzo. Pakutarisa, mushandisi anogona kukurumidza kuona kuti ndezvipi zvese sarudzo muSpar uye Unganidza yako PDF.
PDF Shaper Free zvine mutsindo iye anokunda kune vatatu. Iyo ine akawanda maficha kupfuura mamwe maBhaibheri maviri emahara. Kunyangwe iyo isingaenzaniswe nePreview, iyo yakasununguka kunze kwebhokisi chishandiso paMac, inoita kuti basa riitwe pakupera kwezuva. Uye ndizvo zvese zvine basa.
Nzira yekubatanidza kana kubatanidza PDF Files For Free In Windows 10
Gurai, Gadzirai, uye Gadzirai ma PDF maBlue kuburikidza nePlus Mix Mix
Iwo 6 Akanyanya PDF Editors e Windows 10 muna 2021
Nzira Yekutengesa Purogiramu Chengetedza PDF Files In Windows 10
3 Nzira dzeKushandura PDF Uye Chengetai Windows 10
Yakanakisa Yemahara Audio Splitter Software ye Windows 11 / 10
Nzira yekugadzira PDFs mu Microsoft Word
Gadzirisa: Paive paine kukanganisa kuvhura gwaro iri
8 Yakanakisa Google Chrome PDF Mupepeti Wekuwedzera